Yabelana ngokuthenga: kutheni bezenza izinto ezibonakalayo? | Ezezimali
Ukubuyiswa kwezabelo sisicwangciso esiliqili ezenziwa ziinkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo ngokuhamba rhoqo. Kubonakele kwiintsuku zamva nje ngesinye sezona zitokhwe zisebenzayo kwimarike yaseSpain. Kuba ngoku, ngelixa imarike yestokhwe kwihlabathi liphela yawa ngamandla anyanzelekileyo, i-Naturgy yenye yezokhuseleko ezimbalwa ezixabise kakhulu kwezona zidwelisiweyo zaseSpain, ngokunyuka okungaphezulu kwe-1%. Isizathu kufuneka sifumaneke kuba ityale i-20,5 yezigidi kwi Thenga izabelo ezingama-904.207 zoovimba. Umsebenzi ophulukene nenxalenye enkulu yabatyali mali abancinci nabaphakathi xa ii-equities zikwimeko ecacileyo esezantsi.
Ngokukodwa, ngaphakathi kwesakhelo senkqubo yokuthenga kwakhona izenzo zakho Yenkampani, i-Naturgy ifumene izabelo zayo ezingama-249.716 ngoDisemba 18 ngexabiso eliphakathi lama-euro angama-22,79 kunye nenye i-173.118 ngexabiso eliphakathi lama-euro angama-22,94 ngomhla we-19 kule nyanga. Kwangokunjalo, inkampani ithenge kwakhona izabelo ezingama-216.373 ngoLwesine odlulileyo, nge-20 kaDisemba, ngexabiso eliphakathi lama-euro angama-22,75 ngesabelo ngasinye kwaye zizonke ezingama-265.000 zezabelo zalo ngexabiso eliphakathi lama-euro angama-22,31 ukuphela kweveki.
Ngale nyathelo, inkampani yamandla esizwe ithathe isigqibo sokunyusa umthamo wokufunyanwa Izabelo ezizezakho, ukusukela phakathi kwe-7 ukuya kwe-14 kuDisemba, inkampani yamandla ibithengile izabelo zayo ezingama-525.651 ngexabiso eliphakathi phakathi kwe-22,14 kunye ne-23,09 ye-euro ngesabelo ngasinye. Kuyamangalisa xa le nkampani yenye yeenkampani ezisebenza ngokugqwesileyo kunyaka ophelileyo wokurhweba. Kunye nezinye iinkampani zombane ezidweliswe kwimarike yemasheya, ezinje ngeIberdrola okanye i-Endesa. Yiyo ke, intshukumo ethe yathathela ingqalelo iiarhente zezemali kunye nabalamli.
1 Thenga umva: amaxabiso aphantsi
2 Iziphumo zengqondo zalo msebenzi
3 Izinto eziluncedo zale ntshukumo ye-accounting
4 Izicwangciso ezisetyenziswayo
5 Iziphumo eziveliswe yile ntshukumo
6 Ngaba kufanelekile kubathengisi?
Thenga umva: amaxabiso aphantsi
Enye yeenjongo zokwenza isabelo sokuphinda ubuyise inyani kukuba yenzelwe ukwenza kwaye Yandisa eyakho ipotifoliyo phantsi kwamaxabiso okhuphiswano ngakumbi kunangaphambili. Ukusuka kule meko ngokubanzi, ihlala isisiqhelo esisetyenziswa ziinkampani ezidwelisiweyo ngokungaphezulu okanye kancinci. Ngenjongo yokwandisa iipotifoliyo, ngokubanzi ngexabiso elingcono kunezabelo zeenkampani ezidwelisiweyo ngaphambili.
Esi sicwangciso sihlala siphuhliswa xa ixabiso lamaxabiso abo lincipha ngenxa ye- isigaba sebassist kwiimarike zezabelo. Xa amaxabiso abo efumene isohlwayo esiqatha ngenxa yezinto ezininzi eziza kuhlaziywa kwelinye inqaku elikhethekileyo kweli candelo lotyalo mali. Ukuze ucace ngakumbi ukusukela ngoku, yile nto yenziwa nguNaturgy, owayesakuba yiGesi yeNdalo. Ngamanye amagama, yomelezisiwe kwizikhundla zayo kwaye ngendlela ebonakalayo.
Iziphumo zengqondo zalo msebenzi
Ukuhlawulwa kwakhona kwezabelo yinkampani edwelisiweyo ngokwayo kunefuthe elikhawulezileyo kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Banentembelo enkulu kwinkampani kude kube ziintsuku ezimbalwa ezidlulileyo nakwinxalenye elungileyo yezicwangciso ezisetyenzisiweyo bagqibe ekubeni bathathe izikhundla kwixabiso okanye ngokulula ukwanda ngokulinganayo. Njengoko beqinisekisa ukuba inkampani inokholo oluninzi kumathuba oshishino lwayo, bacinga ukuba kungcono ukuphinda-phinda ezi ntshukumo, ngamandla okanye kwelinye.
Ngokubanzi, ezi ntlobo zemisebenzi zenziwa kwixesha eliphakathi nelide. Nangona kungekho kunqongophala kweentshukumo zokuqagela ezona njongo zazo ziphambili kukwenza ukonga kunenzuzo ngexesha elifutshane elinokubakho. Nangona imfuneko ebalulekileyo yokujoyina esi sicwangciso sikhethekileyo kwiimarike ze-equity unemali eyimfuneko ukwenza le misebenzi kwintengiso yesitokhwe. Ayingabo bonke abatyali mali abancinci nabaphakathi abakule meko, njengoko nawe ngokwakho uza kwazi ngamava akho kolu hlobo lokuhamba kwezabelo.
Izinto eziluncedo zale ntshukumo ye-accounting
Lixesha elifanelekileyo lokutyhila ukuba zeziphi izibonelelo ezifanelekileyo zokwenza ezi ntshukumo kwintengiso. Ewe, ukubuyisa isabelo yenye yeendlela inkampani enokubabuyisela ngayo kubanini zabelo. Kwiimeko ezininzi ngokusasazwa kwe Izabelo phakathi kwabanini zabelo. Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba lo msebenzi wobalo unokubonisa ukuba ekugqibeleni kukho abaphathi kunye nabatyali mali abakhulu ababonisa ukuzithemba kwabo kwinkampani. Kwaye ke, eyona ndlela yokubonisa kukuthenga izabelo. Kuxhomekeke kuwo wonke umyalezo wokuzithemba abawunika abatyali mali.
Kwelinye icala, inesinye isiphumo sokulandela umkhondo phakathi kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuba ekugqibeleni baxelise okanye baphindaphinde ezi zenzo nge Ukuzithemba ukuba ixabiso lesitokhwe liya kunyuka, ubuncinci kwixesha eliphakathi nelide. Nangona le meko ayinyanzelekanga ukuba izalisekiswe, inokuba yinto enqwenelekayo kakhulu kwinxalenye enkulu yeearhente zezemali. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Indlela engaqondakaliyo esetyenziswa yinxalenye enkulu yabatyali mali abancinci naphakathi kukukhetha ukuthengwa okwenziwe ziinkampani ezidwelisiweyo yenza imali ngokulondoloza kwakho ngendlela ekhuselekileyo nesebenzayo. Ayothusi into yokuba ezi datha zenziwa zaziwa esidlangalaleni kwimithombo yeendaba eziphambili ezikhethekileyo kwiimarike zezabelo. Ukusuka kule meko ngokubanzi, ngumsebenzi onenzuzo kakhulu ukuwenza xa imigaqo yokusisigxina iya kwiminyaka emininzi ebonwayo.
Kwelinye icala, ukubuyiswa kwezabelo kufuneka kwenziwe xa ixabiso lezabelo lisondela ezantsi kwalo ngexesha lokuhla kakhulu. Lixesha elifanelekileyo lokuthatha izikhundla ezitsha kwixabiso ukusukela kula manqanaba Inzuzo enokubakho iphezulu kakhulu kunangaphambili. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Sisicwangciso esisetyenziswa zezinye zeenkampani ezidweliswe kwii-equities.
Iziphumo eziveliswe yile ntshukumo
Ukuthengwa kwakhona kwezabelo kukodwa akulunganga kwaye akulunganga, kodwa ngokuchaseneyo, kuya kuxhomekeka kwindaleko yayo kwiimarike zezemali ukusukela ngala mzuzu ukuya phambili. Kodwa kuyo nayiphi na imeko ineziphumo ezithile eziqhelekileyo kolu hlobo lomsebenzi kwaye esekwe kule minikelo ilandelayo sikubhengeza apha ngezantsi.
Yonyusa i- ubunzima kubanini zabelo yenkampani edwelisiweyo, kumanqanaba axhomekeke ekuthengeni okwenziwe ngelo xesha.
Ukuba yonke into iqhubeka ngokuchanekileyo Inqanaba lenzuzo iya kuba nkulu kakhulu kule minyaka imbalwa izayo. Into eyonyukayo kwelinye icala ukuba inkampani ihambisa izabelo phakathi kwabanini zabelo. Ukongeza, ke, ixabiso kwizabelo kwaye ngendlela ebonakalayo.
Yintshukumo ejolise kuyo ixesha elide lokuhlala kwaye ayisiyiyo ke intshukumo yohlobo lokuthelekelela okanye ngombono wokurhoxisa izikhundla kwiinyanga ezimbalwa okanye kwiminyaka. Umnqweno wokuhlala yenye yeedinomineyitha zabo eziqhelekileyo nolwamkela olu hlobo lokuthenga kwiimarike zezabelo.
Isicwangciso esisebenzayo nesithembekileyo ukuba siphuhlisiwe kwiinkampani ze ikepusi ephakathi kunye enkulu. Ngokukodwa, ukuba bazinze kakhulu kwimigca yabo yeshishini. Umzekelo, iibhanki, iinkampani zombane, iinkampani zeoyile okanye iinkampani zeinshurensi.
Ngaba kufanelekile kubathengisi?
Ngayiphi na imeko, omnye wemibuzo ephakanyiswe yile ntshukumo kwimarike yemasheya kukuba ingaba ilungile na kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwaye ngakumbi ukuba kufuneka basebenzise esi sicwangciso sotyalo-mali. Ewe, kule meko kukusebenza ithwala umngcipheko ongaphezulu kuba banokuchaphazela inqanaba lokuthengiswa kwemali eboniswe ziakhawunti yomsebenzisi. Ngokunyuka kokuthengisa izabelo ukuba aziguquki kakuhle kwiinyanga okanye kwiminyaka ezayo. Xa kunokwenzeka ukuba intengiso yenziwe kude kakhulu kwixabiso lokuthenga.
Ngesi sizathu, kufuneka kuthathwe amanyathelo okhuseleko ukwenza lo msebenzi. Ngaphandle kokuba ucacile ubizo lokuba sisigxina kwaye ke kwimeko enjalo inokuba lithuba elicacileyo lokushishina. Apho iziphumo ziya kubonakala khona kwixesha eliphakathi nelide. Ke ngoko, kuyakufuneka kucace gca malunga neenjongo ezilandelelweyo kutyalo-mali. Ngamanye amagama, awunakho ukuthenga kwakhona isitokhwe ngoluhlobo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kufuneka kubekho amandla amakhulu okuqhuba le ntshukumo kwiimarike zezabelo.
Akumangalisi ke ukuba kufuneka kuthathelwe ingqalelo into echaseneyo nengafunekiyo enokwenzeka kwaye ayisiyonto ngaphandle kwexabiso lenkampani ukwehla, nakumanqanaba angenakuthathwa yiprofayili ethile yomtyali mali. Ngoyena mngcipheko uphambili ekuvunyelwene ngawo ngoku kuthengwa kutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Yabelana ngokuthenga: kutheni bezenza izinto ezibonakalayo?